ဒိုင်အိုနီ (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒိုင်အိုနီ (/daɪˈoʊni/) သည် စနေဂြိုဟ်၏ ဂြိုဟ်ရံလတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ၁၆၈၄ ခုနှစ်တွင် အီတလီလူမျိုး နက္ခတ္တပညာရှင် Giovanni Domenico Cassini ဆိုသူက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အချင်းအားဖြင့် ၁၁၂၂ ကီလိုမီတာရှိပြီး နေအဖွဲ့အစည်း၌ ၁၅ ခုမြောက် အကြီးဆုံးဖြစ်ကာ ဒိုင်အိုနီလ၏ ထုထည် ၃ ပုံ ၂ ပုံကို ရေခဲဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Cassini အာကာသယာဉ်ဖြင့် လေ့လာချက်များအရ ဒိုင်အိုနီလ၌ အတွင်းပိုင်း ရေသမုဒ္ဒရာ တည်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
7021109545200000000♠(1.095452±0.000168)×1021 kg (1.834×10−၄ Earths)
↑ ၁.၀ ၁.၁ http://exp.arc.nasa.gov/downloads/celestia/data/solarsys.ssc Exp.arc.nasa.gov Retrieved on 05-21-07 Archived March 9, 2005, at the Wayback Machine.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Roatsch၊ T.; Jaumann၊ R.; Stephan၊ K.; Thomas၊ P. C. (2009)။ "Cartographic Mapping of the Icy Satellites Using ISS and VIMS Data"။ Saturn from Cassini-Huygens။ pp. 763–781။ doi:10.1007/978-1-4020-9217-6_24။ ISBN 978-1-4020-9216-9။
↑ Phil Davis? (April 1, 2011)။ Solar System Exploration: Planets: Saturn: Moons: Dione: Facts & Figures။ NASA။ 12 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 24, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cassini, G. D. (1686–1692). "An Extract of the Journal Des Scavans. Of April 22 st. N. 1686. Giving an Account of Two New Satellites of Saturn, Discovered Lately by Mr. Cassini at the Royal Observatory at Paris". Philosophical Transactions of the Royal Society of London 16 (179–191): 79–85. doi:10.1098/rstl.1686.0013.
↑ Piazza၊ Enrico။ About Saturn & Its Moons: Dione။ NASA - Jet Propulsion Laboratory။ 20 August 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-08-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA Astrobiology Strategy။ NASA (2015)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒိုင်အိုနီ_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=647556" မှ ရယူရန်
၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။